China Strongman worm bag ifektri kanye nabaphakeli | Feiqing
Igobolondo lesikhwama sethu seStrongman worm senziwe ngo-1050D Cordura 100% wenayiloni YKK material uziphu, intambo ebomvu, iringi yensimbi, i-velcro. Izikhwama zokugcwalisa zenziwe nge-1000D Cordura 100% inayiloni YKK uziphu wezinto, ungqimba oluphindwe kabili, olufana nezikhwama zethu zesikhwama esinamandla.
Isikhwama sesibungu siklama kumuntu o-2, 3person, 4person, 5person, 6person.worm bags ubukhulu cishe bungu-30.5cm. Ungangeza imvuthuluka yenjoloba yobukhulu obuhlukile ukulungisa isisindo. Izikhwama zokugcwalisa zine-100lb ne-200lb, isikhwama se-spacer ngu-6lb. Uma udinga ezinye izinsimbi zokugcwalisa, singenza futhi Zonke izikhwama zokugcwalisa zifaka isistimu evikelekile yokukhiya kabili, ukuhlanganisa ukuvalwa koziphu ne-hook-and-loop flap ukuvimbela noma yikuphi ukuchitheka lapho iqembu lakho lisendleleni. izikhwama zenziwa kusikhonkwane esifanayo esivivinywe kabili esibonwe kumaSandbags ethu.
Isikhwama se-Strongman worm sisetshenziselwa ukwenza ukuqeqeshwa kweqembu, amandla okuqina, ukukhuthazela, ukuxhumana nokusebenza ngokubambisana, noma ibuphi ubuthakathaka kunoma iyiphi indawo nakanjani bungatholakala uma usukhathele futhi ukhathala ngokwengeziwe.
Sicela uthathe inothi: sizothumela isikhwama sezibungu singenalutho ukuze sikongele izindleko zokuthumela, lapho usithola, isikhwama sezibungu singasethwa kalula ukuthi sisetshenziswe kumzuzwana nje.
Igobolondo lesikhwama se-1.Worm lenziwe ngezinto ze-1050D Cordura 100% zenayiloni. Izikhwama zokugcwalisa zenziwe nge-1000D Cordura 100% impahla yenayiloni.
Isikhwama se-2.Worm sonke sikhiywe yi-YKK ZIPPER, i-hook-and-loop flap
3.Dimension: 30.5cm ububanzi.
Isikhwama somuntu esingu-2-worm-L160cm, isisindo: 160-230LB
Isikhwama somuntu ongu-3-245cm, isisindo: 230LB-365LB
Isikhwama somuntu esingu-4 - 335cm, isisindo: 300-470LB
Isikhwama somuntu esingu-5 worm-400cm, isisindo: 360LB
Isikhwama somuntu esi-6 somsundu-520cm, isisindo: 450LB
Langaphambilini Isikhwama sokuphonsa uStrongman
Olandelayo: Isikhwama sesibungu sigcwalisa isihlabathi
Ama-sandbags omsebenzi osindayo weStrongman
Umbala wesikhwama sesanti esiqinile